Amagama enkuthazo kumntu ogulayo Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kubantu abanengxaki yempilo, amagama ambalwa okhuthazo abalulekile ukuba bazise ukuba ababodwa. Apha ungafunda Amagama enkuthazo kumntu ogulayo ukubonisa uvelwano kunye nenkxaso kuye nakubani na oyifunayo.
Amagama enkuthazo kumntu ogulayo osweleyo
Imeko yengqondo yomntu ochachayo okanye osokolayo yingxaki yezempilo ibalulekile, kubonisiwe ukuba abantu abanomoya ongcono xa bejamelene neenkqubo zabo zonyango ezifunekayo bafumana ukubuyela kwimeko engcono kunaleyo ingachananga.
Ukongeza, xa abantu beziva ngathi ababodwa kumzabalazo wabo, baziva benqabisekile enokubaluleka kakhulu xa kufikwa ekufumaneni nasekuqhubekeni nonyango olunikiweyo. Inkxaso yethu iyimfuneko kwaye ibalulekile kwaye okukhona sinokubonisa, kokukhona lowo simthandayo eya kuziva ngcono.
Kufuneka siyamkele imiceli mngeni esijongana nayo mihla le, nokuba bajongene nantoni, singasoloko sizibeka phambi kwabo. UThixo usivumela ukuba sibe ngamagorha kwaye sihambise loo mandla okulwa. Unokuba nomdla Umthandazo kuSan Ramón Nonato.
Apha unokufunda uluhlu olukhulu oluninzi Amagama enkuthazo kumntu ogulayo kwaye ngenxa yoko umkhuthaze ukuba abuyele kwangoko kwaye anelise, esoloko eneyona mandla alungileyo kumntu ochaphazelekayo:
“Ndicela uxolo ngokuba niyenzile le nto. Akukho mzuzwana udlulayo xa bengacingi ngawe nokubuyela kwimeko yesiqhelo. Le yimfundiso eza kukwenza womelele, wonwabe uze uphile kwakamsinya. "
"Uxolo ngokungazi amagama achanekileyo ukuwava ngoku, kodwa into echanekileyo yokutsho ukuba ndiya kuhlala ndikhona kwaye namhlanje ayiyi kuba yinto ekhethekileyo."
"Ndiyathemba ukuba ungaziva iingcinga zam kunye namandla am kunye nawe, ngethemba lokuba uza kuba ngcono kungekudala."
"Inqaku nje elikhawulezayo lokukuxelela ukuba ndicinga ngawe kakhulu kwaye ndinqwenela nomphefumlo wam ukuba uchache ngokukhawuleza."
"Akwanelanga amagama ukuba ndichaze indlela endizimisele ngayo ukuhamba nawe kule meko."
"Ukuba kukho into eyenza lula lo mthwalo uyicingile, ndixelele kwaye andizukuthandabuza ukwenza njalo."
"Ndikhona ngenxa yakho kunye nokuphucula ngokukhawuleza, ke qiniseka ukuba awuwedwa kwaye awuyi kubakho."
“Ndifuna ukuthatha ixesha ndikukhumbuze ukuba ungumntu onamandla, okrelekrele kwaye omangalisayo, ke le iya kuba yinto ozoyiphumelela kwakamsinya. Yomelelani, nikhumbule ukuba ndilapha.
“Ufuna nje ixesha kunye nokuphumla okuninzi, kodwa oku kuyakuba yinkumbulo kunye nomceli mngeni kumandla akho, kuba uligorha kwaye uyakuhlala ukhona. Thatha ithuba lokuncitshiswa, bukela iimovie ezintle kwaye uzise itshokholethi eshushu ebhedini yakho! Ndiyakukhumbula. Ukwanga. "
“Siyakholelwa kuwe nakwizinga lakho lokoyisa naluphi na uhlobo lobunzima. Udinga nje ixesha, kwaye apha ndiza kukunceda ulibale okubi. Ndizakukubamba ngesandla ukuze ungawi kwaye ndizokunceda ukuphakamisa umoya wakho xa uziva ngathi awusenakuphinda usithathe. "
"Ukuze uphilise ngokukhawuleza, ndiyakuthandazela, impilo yakho, impilo yakho kwaye oku kungumqondiso wokuba unokujongana nayiphi na imeko."
«Ndiyathemba ukuba kancinci kancinci uya kuziva ungcono. Ndifuna ukuba nawe, ndikukhaphe kwaye ndikuncede umelane nale meko. »
"Amahla ndenyuka adla ngokuvela, kule meko incinci empilweni, kodwa ungakhathazeki, ndiqinisekile ukuba uza kuba bhetele kungekudala."
"Awazi ukuba ndinqwenela kangakanani ngentliziyo yam yonke ukuba ukhawuleze uphume kule meko kwaye uphile ngokukhawuleza ngokukhawuleza ukuze sonwabe kunye ngalo lonke ixesha esishiyekileyo ukuba siliphile."
"Ndinqwenela ukuba uphile kwakamsinya kwesi sigulo uhlangabezana naso, uzakubona ukuba yonke into izakuhamba kakuhle."
"Ndinqwenela ukuba ukhawuleze uphile kwesi sifo, uzobona ukuba akukho nto imbi kwaye kungekudala uzakubuyela kwindlela yakho yemihla ngemihla"
«Ndiyathemba ukuba uza kuba ngcono kungekudala kwaye uyawakhumbula onke amaxesha obomi obukuncumeleyo. Ulijoni lokwenene.
«Amandla amaninzi kuwe, ndiyathemba ukuba unokufezekisa ukuzola noxolo kwinkqubo yakho yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Awukholeleki kwaye uza kuqhubeka ubabonisa, ndikunye nawe ke ungoyiki. »
«Lo myalezo uhamba kunye nokuwola ngamandla amakhulu kunye nothando kunye nothando. Uphile ngokukhawuleza! Ndiyakuthanda."
"Ngomphefumlo wam, ndifuna wazi ukuba ungathembela kum, ukuba ezi zinto zenzeka ngokungalindelekanga kwaye kufuneka sibeke obona buso bethu, nokuba kungabiza malini na, ukuze siqhubeke."
«Akukho ndlela yokuziva ulungile kwaye ugcwele ubomi. Uphile ngokukhawuleza!"
«Ndiyathemba ukuba amazwi am anikhumbuza indlela obumnandi ngayo ubomi, kwaye ndifuna ukukukhumbuza indlela obebuhle ngayo ubomi bam ecaleni kwakho. Ndiyathemba ukuba uza kuba ngcono kungekudala kwaye
«Ndiyathemba ukuba uyayazi indlela endikuthanda ngayo kwaye ndinemiqathango ecaleni kwakho rhoqo. Namhlanje kunanini na ngaphambili ukukunika onke amandla am kunye namandla am ukuze ube ngcono kungekudala. Ihagi!"
Ngamanye amaxesha asiqondi ukuba kutheni izinto zisenzeka, kodwa kufuneka sihlale sikhumbula ukuba somelele kuneengxaki zethu. Ndiyathemba wena, kwinkalipho yakho namandla akho okuzibeka phambi kwabo bazakwenzeka, ndizakuba lapha ukuze ndibambe isandla sakho ndikuncede uhambe "
»Phezulu, unako! Masikuphakamise, ndikubone ukhanyisile njengesiqhelo, andifuni ukuba ube noxinzelelo malunga nento edlula ngoluhlobo. Uxabiseke kakhulu! »
»Ungomnye wabantu abomeleleyo endibaziyo kwaye ndiqinisekile ukuba uza kuphila kungekudala kwaye oku kuya kuba sisikhumbuzo kuphela. Kodwa okwangoku ungalibali ukuba ndiyakuthanda kwaye ndiya kuhlala ndisecaleni kwakho kuyo yonke into oyifunayo. Uphile ngokukhawuleza!"
«Ndikunqwenela ukuba uchache ngokukhawuleza ukuze ube secaleni kwethu njengemihla ngemihla, ngokuqinisekileyo kwiiveki ezimbalwa ezizayo siza kuba nawe apha. Sikukhumbula kakhulu, khathalela! »
»Akufanele ukhathazeke ngale meko yobuhlobo, ungaziva ungonwabanga, uya kubona ukuba yonke into iya kusombululwa kungekudala. Ndifuna ukukubona uncuma. "
«Ndinithumela iintyatyambo ezithile ukuze ndinikhumbuze ngobuhle bobomi, ndininike ukhuthazo kwaye niza kuphuma niqhubeke nokwabelana amaxesha kunye. Uphile ngokukhawuleza!"